OWOSUTHU UTHI ANGEKE BALILAHLE ITHEMBA – Sivubela intuthuko Newspaper
Umdlali wasesiswini woSuthu uSiphelele Magubane
UMDLALI wasesiswini waMaZulu FC uSphelele Magubane uchaza ngezinyanga zakhe ziyisithupha ejoyine uSuthu. Lo mdlali oneminyaka (27) ubudala ujoyine leli qembu maphakathi nesizini esamisiwe ngenxa yobhubhane lweCovid-19.
UMagubane obegijima kuGolden Arrows ujoyine emva kokuhlukana kwenhloko nesixhanti naleli qembu. Kusukule ejoyine uSuthu usadlale imidlalo emihlanu ngaphambi kokuba kumiswe imidlalo ngenyanga uNdasa.“Angikokwenzi kabi kulesizini kodwa ngiyazi ukuthi kukhulu engingakwenza. Inkinga ngike ngahlala isikhathi eside ngingadlali, kodwa konke lokho ngisebenza phezu kwakho ukuzama ukukulungisa,” esho.
Lo mdlali ushiye ku-Arrows engakaze adlale ngisho umdlalo owodwa ngenxa yokulimala. Okuqaphelekayo ukuthi lomdlali ujoyine leli qembu lisengcupheni yokugawulwa yizembe njengoba lihleli endaweni ye-15 kulog ye-Absa Premiership.
“ Yonke imindeni inezinkinga zayo, sibhekene nesimo esibucayi futhi esinzima sokuthi sijkwazi ukuhlala kwi-Absa Premiership. Nakuba kunjalo kodwa kulele kuthina ukuthina sibhekana kanjani nenselelo esibhekene nayo. Sidalelwe ukunqoba ngeke sililahle ithemba,”
Sezivuliwe izikhungo zentela eMhlathuze